Mametra Ny Fifandraisana Sy Ny Fahalalaham-pitenenana Ny Fahatapahan’ny Herinaratra Ao Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2016 5:23 GMT
Tsy ny fanapahan-kevitry ny governemanta mivantana hanasazy azy ireo ihany no fandrahonana mihatra amin'ny fahalalahana ao Venezoela fa ny fidirana voafetra ao amin'ny aterineto ihany koa noho ny fahatapahan-jiro sy ny fahasimbana ary ny fivakisan'ny rafitra. Sary avy amin'i Edu Alarcón tao amin'ny Flickr. Zon'ny mpamorona Creative Commons license (CC BY 2.0)
Azo raisina ho endriky ny sivana ve ny tsy fahampian'ny herinaratra? Raha tsy misy herinaratra, tsy afaka mandeha lavitra ny fifandraisana amin'ny alalan'ny mediam-bahoaka – dingana andraisan'ny olom-pirenena anjara sy hitarihana ny fiarahamonin'izy ireo. Ao anatin'ny krizy ara-toekarena, ara-tsosialy sy ara-politika mamely an'i Venezoela, miatrika fiharatsian'ny fifandraisandavitra sy ny kalitaon'ny serasera, mbamin'ny fahatapahan-jiro tsy mitsahatra ny olom-pirenena. Raha ampiana ny tontolo ankapoben'ny haino aman-jery, dia miteraka toe-javatra miantraika ratsy amin'ny fahalalahana hahazo vaovao sy ny fifandraisana izany.
Manasokajy an'i Venezoela ho firenena “tsy malalaka” eo amin'ny sehatry ny fahalalaham-pitenenana ny Freedom House, fikambanana tsy miankina ao Etazonia natao hiaro ny fahalalahan'ny olon-tsotra, ary manome azy laharana faharoa ratsy indrindra amin'ny fahalalahan'ny Aterineto ao amin'ny faritra. Ho an'ny Venezoeliana, tsy mora ny mahazo vaovao tsy mitongilana sy marina miaraka amin'ny fanajana ny vaovao isan'andro. Maro ireo mitodika any amin'ny tambajotra sosialy mba hahazoana izay ilaina tsy vitan'ny haino aman-jery nentim-paharazana tanterahana.
Raha niteraka fitomboan'ny isan'ny mpiserasera aterineto tsikelikely ny politika sosialistan'ny governemantan'i Hugo Chávez, tsy niaraka tamin'ny fitomboan'ny foto-drafitrasa sy ny fahaiza-manao izany fitomboana izany. Niteraka fahasimban'ny kalitaon'ny fifandraisana tsikelikely izany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nanjary iray amin'ireo firenena manana hafainganam-pandehan'ny aterineto sokatra indrindra ao Amerika Latina i Venezoela. Raha nampitombo ny fielezan'ny aterineto sy ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana ny firenen-kafa, mbola ao anatin'ny famerana goavana kosa i Venezoela, mitovy ny ao amin'i Bolivia sy Paragoay – na dia mihoatra noho ny ao Kiobà, Honduras sy Nicaragoà aza ny isan-jaton'ny mpiserasera.
Noho ny fanarahamaso amin'ny fifanakalozana devizy nanan-kery nanomboka tamin'ny 2003, nisy fiantraikany teo amin'ny sehatry ny fifandraisandavitra ihany koa ny famerana ny fanafaran'entana, ka tsy maintsy nampihena ny fanomezana vola vahiny tao anatin'ny taona vitsivitsy izy ireo (orinasan'ny fifandraisandavitra) mba hividianana kojakoja fanolo sy hikojakojana ireo foto-drafitrasa. Fidirana amin'ny aterineto miadana sy mitsitaitaika no vokatr'izany fitambarana anton-javatra izany. Araka ny nosoratan'i Eduardo Marín ho an'i Gizmodo:
Ao Venezoela, mponina 0.2% monja no manana hafainganam-pandehan'ny aterineto mihoatra ny 10 Mbps. Raha mandray ny fanambaran'ny FCC isika, ara-teknika, tsy manana haingam-pandeha avokoa ny rehetra. Etsy an-danin'izany, 2.1% monja amin'ny Venezoeliana no manana fifandraisana [hafainganam-pandeha] maherin'ny 4 Mbps.
Nivadika ho karazana vazivazy ny tena itarainan'ireo mpiserasera tao amin'ny tambajotra:
Miadam-pandeha ny aterineto Venezoeliana ka indray andro aho nitroka hira iray ary tamin'ny fotoana nahavitany, efa nivoaka ny hira remix.
Niteraka andiana fepetra avy amin'ny governemanta ny krizin'ny herinaratra vao haingana. Anisan'izany ny fahatapahan-jiro natao haharitra telo na efatra ora isan'andro manerana ny firenena izay tsy miantraika amin'ny fifandraisana ihany ny fahatapahana fa miteraka voka-dratsy bebe kokoa toy ny fahasimban'ny fitaovana, tsy fandehanan'ny tambajotra finday, ary ny olan'ny fifandraisana mandritra ny ora maro aorian'ny fiverenan'ny herinaratra.
Very ny tontolo maraina noho ny fahatapahan'ny herinaratra. Tena nahatsiravina [izany], manomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 12 atoandro. Nihidy ny banky, tsy misy aterineto, tsy mandeha ny jiron'ny arabe.
Rehefa tapaka ny herinaratra, manomboka manana olana amin'ny jiro famantarana ny findaiko aho 🙁
Mandritra ny fahatapahan-jiro, sy ankoatra izany koa, ny tsy fahampian'ny fampiasam-bola eo amin'ny foto-drafitrasan'ny fifandraisandavitra dia misy fiantraikany amin'ny tolotra finday, izay ampiasain'ny Venezoeliana ho tambajotra vonjimaika rehefa misy ny tsy fahombiazan'ny servisin-dahatahiry, na rehefa tapahan'ny [mg] governemanta izany. Eny rehetra eny sy mahazatra ny tatitry tsy fahombiazan'ny servisy sy ny fahatapahan-jiro. Mety haharitra ora vitsivitsy na mandritra ny iray andro manontolo tsy misy fanamboarana sy tsy misy fanazavana ofisialy izany:
Amin'izao fotoana izao, misy olana ao Zulia sy Falcon miaraka amin'ny fifandraisana an-tariby ABA Cantv, Movilnet, sy Cantv. Fahatapahan'ny hosina (fibre optique) ve izany? Tena hafahafa.
Miatrika ny fikorontanan'ny fifandraisana, nampiasa vazivazy ny Venezoeliana. Miantso ny hafainganam-pandeha ao Venezoela ho “miadana indrindra ao Amerika Latina” ilay mpanao hatsikana José Rafael Briceño.
Araka ny asongadin'i Briceño, na dia mazava aza fa vokatry ny tsy fahampian'ny fampiasam-bola sy ny politikan'ny governemanta momba ny toekarena ny fahasimban'ny servisy, marina ihany koa fa nifantoka bebe kokoa tamin'ny fanakatonana votoaty amin'ny habaka ny manampahefana misahana ny fiantohana ny kalitaon'ny tolotra fa tsy mba niantoka ny kalitaon'ny fidirana amin'ny aterineto.